ZvirinaniWiFi7: tweak yekuvandudza kutonga kwewifi kubatana kwako | IPhone nhau
Cristina Torres chinobata mufananidzo | | Cydia
Ichokwadi ndechekuti kune mazana ema tweaks aunovandudza nawo mabasa eiyo iPhone yedu. Paizvozvo hatina kana kupokana. Nekudaro, mune ino chaiyo nyaya isu tinoda kutaura newe takanangana nezve iyo yaunowana nayo inonakidza kuvandudzwa mukumisikidzwa kwewifi network yako. Muchokwadi, zvazvinoita ZvirinaniWiFi7, inova protagonist yedu nhasi ndeyekupa iwe kwakanyanya kutonga pamusoro peasina waya maneti ayo mudziyo wako unobatana
Mune ino chaiyo kesi, ne ZvirinaniWiFi7 iwe unozogona kutarisa ako ese akabatana pasina tambo, asi kwete izvo chete. Kune rimwe divi, kubata kuri nyore kunokonzeresa kuti runyorwa rwese rweanowanikwa network dziwedzerwe Uye pamusoro pezvo, ine basa rekusefa iro rinokutendera kuti uratidze chete izvo zvakasununguka, ndiko kuti, izvo zvauchazokwanisa kuwana pasina chero rudzi rwe password. Izvi zvakakwana chaizvo zvekuti iwe unogona kudzivirira runyorwa rurefu muguta rakakura semuenzaniso, mauri kuti uwane iyo yakasununguka iwe unofanirwa kupururudzira nekusingaperi.
Asi kune avo vanotarisira zvakatowanda kubva pane tweak yekuvandudza iyo iPhone's WiFi kutonga, ini ndichakuudza izvozvo na ZvirinaniWiFi7 iwe uchave unokwanisa kubvisa chiyero gadziriso iyo iyo iPhone yakavharirwa neApple inounza nekukasira, kuitira kuti nekuda kwayo iwe unogona kuwana akati wandei mamwe manetwork kupfuura iwe wawaifunga kuti aivapo. Uye zvakare, rimwe basa rekuwedzera rinosanganisirwa raunogona kugadzirisa kuti kana uchibatanidza kune imwe netiweki yakachengeteka iyo iPhone yakavhurwa zvachose, iyo inonyanya kubatsira uye iyo kunyangwe paine tweaks, nenzira iyi yaizoitwa pasina kumwe kuisirwa.
Kana iwe uchida zano ravanotikumbira mukati ZvirinaniWiFi7Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuwana iyo BigBoss repository ye $ 1.50.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » ZvirinaniWiFi7: tweak yekuvandudza kutonga kwewifi yekubatana kwako
Chero ani anoziva nzira yekugadzirisa grey wifi dambudziko pane iyo 4s ????
Luis Wicochea akadaro
Iwe unotora reflow mune iyo wifi module (Dzoreredza iyo solder yewifi module nemhepo inopisa), ini ndinokurudzira iwe kuti uongorore zvimwe uye uzviite, ini ndatogadzira mazhinji ane iro dambudziko. Ini ndinogona kukutsigira kuburikidza netsamba, ndakazvipira kugadzirisa zvigadzirwa zvemaapuro.
Pindura Luis Wicochea
Ndakuita kudziya ne dryer bvudzi, yakashanda kwe1 vhiki uyezve dambudziko rakadzoka.
Iyo yakanakisa shongwe yekudzivirira mitambo yeIOS